I-Dramatic Ocean Views, Amakamelo okulala angu-2 Ayinhloko, Ama-balcony angu-2, Amachibi ama-2 - I-Airbnb
I-Dramatic Ocean Views, Amakamelo okulala angu-2 Ayinhloko, Ama-balcony angu-2, Amachibi ama-2
Playa Flamingo, i-Costa Rica
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Krain
Iphrothokholi Yokuhlanza Ethuthukisiwe Yokulwa ne-CO-VID 19! Cela Imininingwane! Vuka uthole ukubukwa okumangalisayo kwe-Pacific Ocean kuleli gumbi elinamagumbi okulala angu-2, 2 ½-igumbi lokugezela elihlotshiswe ngokumangalisayo eliseFlamingo, eCosta Rica. Imbalwa kakhulu imibono efana nalena emhlabeni.
Abavakashi bethu BAYALITHANDA leli khaya! Ukusuka endaweni yokuhlala eyinhloko, kuvulandi omkhulu, negumbi lokulala eliphakeme, umuntu angabona ukushona kwelanga okumangalisayo, iziqhingi ezingavamile, namagagasi eshaya amabhishi angaba yisihlanu. Lokhu kubuka kuzokuqeda umoya! 4 x4 Imoto Iyanconywa. Uhamba neqembu elikhulu? Ayikho inkinga! Siphatha ama-condo angu-9 e-Flamingo, ngaphezu kwanoma yimuphi omunye umphathi wendawo, futhi siyakujabulela ukukusiza.
Leli khishi le-condo lifika lifakwe ibha yasekuseni, isitofu esinohhavini, umshini wokuwasha izitsha, i-microwave, ama-granite countertops, nazo zonke izinsiza ozidingayo ukuze ujabulele iholide lakho. Ikhishi livuleka kahle lingene endaweni yokudlela (ehlala abantu abahlanu) kanye nendawo yokuhlala enkulu. Iminyango emihle yengilazi eshelelayo enobude obugcwele evulekile ukuveza i-balcony ebanzi, egcwele itafula lokudlela labantu abangu-6 kanye nama-chaise amahle nezihlalo zamagumbi okuphumula.
Igumbi lokulala elikhulu lingafinyelelwa kuvulandi omkhulu ngezicabha zengilazi ezishelelayo futhi linombhede wenkosi, ikhabethe lokungena, ukubukwa okumangalisayo kolwandle, kanye ne-balcony ye-juliet ehlukile enokubukwa okuhle kwesigodi. Jabulela ukudla kwasekuseni embhedeni ngenkathi ubuka i-Pacific Ocean kanye nokubuka imikhomo! I-ensuite master bathroom inobhavu ne-shower combo.
Igumbi lokulala lesibili liqukethe imibhede emibili engashintshwa kalula ibe umbhede wenkosi (shayela ngaphambili ukuze silungise umbhede ngendlela othanda ngayo). Igumbi lokulala lesibili nalo lijabulela i-balcony yalo, yangasese futhi enefenisha ngokugcwele enolwandle lwe-stellar nokubukwa kwesigodi esiluhlaza. Leli gumbi elisekhoneni linikeza ubumfihlo obanele futhi linezinketho eziningi ze-balcony kunamanye ama-condo akule yunithi.
Azikho izindleko ezachithwa ekuhlobiseni kwaleli khaya. Ikhaya liqukethe impahla esezingeni eliphezulu futhi lihlotshiswe ngokomsebenzi ngama-blues amangalisayo ukugqamisa ukubukwa okumangalisayo kolwandle.
Ikhaya linendawo yokuwasha newasha enosayizi ogcwele kanye nesomisi.
Ukuthuthukiswa kwe-Flamingo Towers kuhlinzeka ngamachibi amabili amakhulu namahle, izihlambi zangaphandle, izingadi ezinomhlaba, ukuphepha kwamahora angama-24 nonogada abasendaweni, igaraji lokupaka elimboziwe elinendawo eyodwa yokupaka iyunithi ngayinye, namakheshi amabili asebenza ngokugcwele. Ukuthuthuka kuwuhambo olusheshayo lwemizuzu emithathu ukuya eFlamingo Beach, lapho kunendathane yezindawo zokudlela eziseceleni kolwandle, i-snorkeling, i-stand-up paddle boarding, i-boogie boarding, i-kayaking, nokudoba. Le condo futhi iyimizuzu emi-5 yokushayela esitolo segrosa esidumile iSuper Massai. Izinsizakalo zezokwelapha, ezamazinyo, nezamakhemisi nazo zitholakala phakathi nohambo lwemizuzu emihlanu.
Ubulungu be-Sailing Center manje sebufakiwe ekuhlaleni kwakho kuleli khaya! Lobu bulungu buhlanganisa izaphulelo ezihlukahlukene (isaphulelo sika-50% sokuqashwa kwezisetshenziswa, izikebhe, ama-kayak, namabhodi okugwedla, izipesheli Zehora Elijabulisayo, nokuningi!). I-Costa Rica Sailing Center iyindawo edumile yokusebenza yabavakashi nabantu bendawo ngokufanayo. I-Sailing Center inechibi elikhulu, indawo yokudlela eseceleni kolwandle, imililo evuthayo yasebusuku, nazo zonke izinhlobo zemidlalo ejabulisayo ongayijabulela. Sicela ubuze nathi ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
Amadolobha aseFlamingo naseBrasilito ahlinzeka ngezindawo zokudlela ezahlukahlukene ezinikeza ukudla kwangempela kwe-Tico, ukudla kwasolwandle okusanda kubanjwa, kanye nokudla kwase-Italy nokunye kwamazwe ngamazwe kuwo wonke amanani. La madolobhana womabili anezitolo ezinkulu ezincane nezimaphakathi kanye nezitolo zezikhumbuzo. E-condo uzothola ulwazi mayelana nezindawo zokuvakasha nemisebenzi ehlanganisa ufudu lwezidleke, uhambo lwe-eco-tourism, i-catamaran, nohambo lokudoba ngomkhumbi, izifundo zokuntweza e-Tamarindo, uhambo losuku oluya ezintabeni ezishisayo eziseduze kanye ne-Monteverde Cloud Forest edumile, ukuvakasha kwemifula yezinyoni. ukubukela, olunye uhambo lwemvelo, nokunye okuningi. I-Flamingo Towers iyindawo ekahle yokuphumula ngasogwini lolwandle noma ukuhlola i-Costa Rica—noma kokubili! Izinkampani eziqashisayo zezimoto zingatholakala eFlamingo nasePotrero, kanye nasemadolobheni amakhulu aseduze e-Huacas naseTamarindo, futhi kunjalo nasezikhumulweni zezindiza zaseLiberia naseSan Jose. Amatekisi nawo atholakala kalula.
Ukusebenzelana nezivakashi kuzoba kude futhi kuzoba okubonakalayo, sisebenzise indlela yokuzihlola ukuze sithobele Inqubomgomo Yokuhlukaniswa Komphakathi, futhi ngaleyo ndlela, sinciphise ubungozi bokutheleleka kuwo wonke amakhasimende ethu kanye nabasebenzi, njalo siletha ubuhle obuhle kakhulu. isevisi.
Ukusebenzelana nezivakashi kuzoba kude futhi kuzoba okubonakalayo, sisebenzise indlela yokuzihlola ukuze sithobele Inqubomgomo Yokuhlukaniswa Komphakathi, futhi ngaleyo ndlela, sin…